Dalxiiska Armenia: Safaaradda Mareykanka waxay ku boorineysaa dalxiisayaasha inay feejignaadaan "nidaamka caadiga ah"
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Dalxiiska Armenia: Safaaradda Mareykanka waxay ku boorineysaa dalxiisayaasha inay feejignaadaan “nidaamka caadiga ah”
Wararka Armenia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Dalxiiska Armenia: Safaaradda Mareykanka waxay ku boorineysaa dalxiisayaasha inay feejignaadaan “nidaamka caadiga ah”
Bayaanka safaaradda Mareykanka ee Armenia, ee ku boorisay muwaadiniinta Mareykanka inay feejignaadaan markay booqanayaan Armenia inta lagu guda jiro fasaxa Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub ee soo socda, kuma jiraan macno siyaasadeed, ayuu yiri Madaxweynaha Xiriirka Dalxiiska Armenia.
Mekhak Apresyan wuxuu xusay arimahan aan kor kusoo xusnay shirkii jaraaid ee sabtidii.
Erayadiisa, bayaanka la yiri waa nidaam caadi ah oo loogu baaqayo feejignaan iyadoo ay sii kordhayaan qulqulka dalxiisyada ciidaha Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub.
"Tani waa nidaam caadi ah, gaar ahaan tan iyo markii faahfaahin dheeraad ah la bixiyay," ayuu yiri Apresyan. "Markaa waxay noqoneysaa mid aan caqli gal aheyn in la muujiyo mowqif adag oo ka taagan munaasabadaas mas'uuliyiinta Armenia."
Wuxuu carrabka ku adkeeyay, guud ahaan, dadweynaha Armenia, oo ay ku jiraan warbaahinta iyo hay'adaha sharci fulinta, inay u baahan yihiin inay abuuraan dalxiis “muuqaal” dalku leeyahay.
"Armenia iyo dadka reer Armenia marwalba waxaa lagu caddeeyay soo dhaweyntooda," Mekhak Apresyan ayaa intaas ku daray. Intaa waxaa dheer, ururo badan oo caalami ah ayaa ku dhawaaqaya heerka [sare] ee badbaadada [Armenia]. Annaga [reer Armenia] waxaan muujinay heer sare oo badbaado iyo wanaag ah xitaa inta lagu gudajiray 'kacaankii jilicsanaa,' kaasoo gebi ahaanba xasilloonaa. Aad ayey muhiim u tahay in dhacdooyinkaas ay tabinayeen warbaahinta caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, tiro badan oo ajaanib dalxiisayaal ah ayaa sidoo kale kaqeybgalay socodkan, [oo] xaqiijinaya waxaan iri. ”
Wasiir: Jarmal kasta waa la tallaali doonaa, waa la daweynayaa ama...
Beeralayda Cadaanka ah: Dacwad cusub oo lagu soo oogay takoorka